छबी जी अब नलुक्नुस ! मासिक ५० हजार चाहियो भन्दै शिल्पाले हालिन् मुंद्धा – ताजा समाचार
छबी जी अब नलुक्नुस ! मासिक ५० हजार चाहियो भन्दै शिल्पाले हालिन् मुंद्धा
फिल्म क्षेत्र, यानिकी शो-बिजनेस । यहाँ जो देखिन्छ, जसको नाम यता-उता जोडिन्छ उसकै चर्चा हुने गर्छ । विशेष त त्यस्तो चर्चा नायक,नायिका, निर्देशक, निर्माताको प्रेम , अफयर र विवाहले नै ओगटेको हुन्छ । नेपाली फिल्म क्षेत्रको कुरा गर्नु पर्दा पछिल्लो समय धेरै नेपाली फिल्म क्षेत्र सँग जोडिएका ब्यक्ती हरुको विवाह भएको छ ।
बिवाहको कारण ले नै प्राय मिडियाको गसिप पाईरहने निर्माता छबी राज ओझा अहिले फेरी उहि फन्डामा देखिएका छन् ।उनले एक मिडिया लाई दिएको अन्तरवार्तामा सिल्पा पोखरेल सँग उनले विवाह गरिसकेको खुलाएका छन् । पत्रकारको “तपाइको सिल्पा जी सँगको विवाह लाई किन प्रस्ट पार्नु भएको छैन भन्ने प्रश्नमा स्पस्टिकरण दिएका हुन् । छबी भन्छन् “सबै काम सङ्गै गर्छौ, र हाम्रो ५ बर्ष अघी नै बिहे भैसकेको हो ।”
छबिकै फिल्म मंगलम रिलिज हुने क्रममा पनि छबी र सिल्पाको बिहेको चर्चा खुबै थियो । फिल्म रिलिज भयो, केहि हद सम्म सफल पनि रह्यो तर उनिहरुको बिहेको चर्चा सेलायो । बिचमा उनिहरु बिच सम्बन्धनै नरहेको गांईगुंई पनि सुनियो । फेरी अहिले एक्कासी बिहे कै प्रसंगमा यो के को लागी ! कि सुन्नमा आए जस्तै जब जब छबीको फिल्म आउने गर्छ, बिहेको प्रसँग बजार तताउनको लागी हातीयार बनाउने गर्छन् उनी ? खास कुरो कि छबी लाई थाहा होला कि सिल्पा लाई !